Ukuqashwa e-Glasgow 's vibrant Southside - I-Airbnb
Ukuqashwa e-Glasgow 's vibrant Southside
Govanhill, Scotland, i-United Kingdom
Le ndlu esanda kulungiswa itholakala eningizimu ye-Glasgow. Ngezinyawo zemizuzu engu-3 ukuya esiteshini sesitimela sase-Queens Park kanye nokufinyelela kwebhasi lendawo. Ngokuhambahamba situsa i-Queens Park okungamaminithi angu-5 ukusuka endlini. Le ndlu inendawo yokupaka yamahhala emgwaqweni etholakalayo nenani elanele lamabha, amathilomu nezindawo zokudlela emnyango wakho. Kubandakanya i-McDonalds engu-24/7 kanye ne-Tesco yendawo. Ngenkathi ulapha, kungani ungavakasheli i-Ginesi 's Gelato (Queens Cafe) edumile. Yaziwa nge-ayisikhilimu yabo ephindwe kabili!
Indlu isesitezi sokuqala nekhishi elihlanganisa zonke izinto eziyinhloko zokupheka. Kunekamelo le-shower nendlu yangasese ehlukile. Ikamelo lokulala lifakwe umatilasi omkhulu wokunethezeka nendawo yokusebenzela. Ikamelo lokuphumula linikeza umbhede owusofa ne-smart TV. Siphinde sahlinzeka ngezinye zezincwadi zethu eziyintandokazi nama-boardgames ukuze uwajabulele.
Uzoba nokufinyelela okukhethekile kuleli fulethi phakathi nokuhlala kwakho.
Njengoba i-SpotHost ingisiza ukuba ngibungaze, ungaqiniseka ukuthi uthola okokuzithokozisa kwezivakashi okuhle kakhulu. Ifulethi lizokwazi ukungena ngamahora angu-24 ngelungu leqembu elihlangana nawe esayithini ukwethula ifulethi nezindawo zalo.
Amathawula wamahhala, i-shampoo, i-shower gel nensipho zinikezwa izivakashi zethu, kanye netiye nekhofi.
Ngenxa yokuzibophezela kwami emsebenzini, ifulethi lami lilawulwa yinkampani enobungane yokubungaza (i-SpotHost) enakekela zonke izivakashi zami egameni lami. Ungabathinta ngokuthumela imiyalezo lapha noma ngokushayela enombolweni yocingo efakiwe. Uma unemibuzo, ngicela ungitshele futhi ngizojabula kakhulu ukukusiza.
Inkampani engibambisene nayo ingakwazi ukuhlela ukudluliselwa nokusuka endlini ngesicelo sezivakashi. Bangasiza futhi ngesitoreji semithwalo uma ufika ngaphambi kwesikhathi noma ushiya sekwephuzile.
Uma udinga imininingwane eyengeziwe noma iyiphi enye isevisi, sicela ubuze futhi sizojabula kakhulu ukukwamukela.
Angikwamukeli ukubhukha kwabantu bendawo abahlala e-Glasgow noma ezindaweni eziseduze. Uma ungabaza, ngicela ungibuze kuqala bese usho isizathu sokuhlala kwakho. Umazisi wakho uzohlolwa ngosuku lokufika lapho uzonqatshelwa khona ukungena futhi kungenzeka ungabuyiselwa imali ngokuhlala kwakho.
4.35 · 23 okushiwo abanye
Isiteshi seQueen Park - ukuhamba imizuzu engu-3
I-Queens Park - ukuhamba imizuzu
engu-5 I-Ginesi 's Gelato (Queens Cafe) - Ukuhambahamba imizuzu engu-3
I-Tesco - imizuzu engu-1 uhamba ngezinyawo
Maphakathi Nedolobha - imizuzu engu-10 yokugibela isitimela
Le ndlu idinga u-$311 wemali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo. Izoqoqwa ngokwehlukana yisakhiwo ngaphambi kokufika kwakho noma lapho ungena.
Hlola ezinye izinketho ezise- Govanhill namaphethelo